Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Mbụ 3:1-24
Ụmụ Devid na ụmụ ụmụ ya (1-9)
Ndị eze si n’ezinụlọ Devid (10-24)
3 Ụmụ ndị a ka a mụụrụ Devid mgbe ọ nọ na Hebrọn:+ ọkpara ya bụ Amnọn.+ Nne Amnọn bụ Ahịnoam+ onye Jezril. Nke abụọ bụ Daniel. Nne ya bụ Abigel+ onye Kamel. 2 Nke atọ bụ Absalọm.+ Nne ya bụ Meaka, nwa Talmaị eze Geshọ. Nke anọ bụ Adọnaịja+ nwa Hagit. 3 Nke ise bụ Shefataya nwa Abaịtal. Nke isii bụ Itriam. Nne ya bụ Egla, nwunye Devid. 4 Ụmụ isii a ka a mụụrụ ya na Hebrọn. Ọ nọ ebe ahụ chịa afọ asaa na ọnwa isii, nọrọkwa na Jeruselem chịa afọ iri atọ na atọ.+ 5 Ndị a ka a nọ na Jeruselem mụọrọ ya:+ Shimia, Shobab, Netan,+ na Solomọn.+ Ọ bụ Bat-shiba+ nwa Amiel mụrụ ha anọ. 6 Ụmụ nwoke itoolu ọzọ Devid mụrụ bụ: Ịbha, Elishama, Elifelet, 7 Noga, Nifeg, Jefaya, 8 Elishama, Elayada, na Elifelet. 9 Ndị a niile bụ ụmụ nwoke Devid mụrụ, n’agụnyeghị ndị nke ndị iko ya mụụrụ ya. Nwanne ha nwaanyị bụ Tema.+ 10 Solomọn mụrụ Rehoboam,+ Rehoboam amụọ Abaịja,+ Abaịja amụọ Esa,+ Esa amụọ Jehoshafat,+ 11 Jehoshafat amụọ Jehoram,+ Jehoram amụọ Ehazaya,+ Ehazaya amụọ Jehoash,+ 12 Jehoash amụọ Amazaya,+ Amazaya amụọ Azaraya,+ Azaraya amụọ Jotam,+ 13 Jotam amụọ Ehaz,+ Ehaz amụọ Hezekaya,+ Hezekaya amụọ Manase,+ 14 Manase amụọ Emọn,+ Emọn amụọ Josaya.+ 15 Ụmụ Josaya bụ Johenan, ọkpara ya, Jehoyakim,+ nwa ya nke abụọ, Zedekaya,+ nwa ya nke atọ, Shalọm, nwa ya nke anọ. 16 Jehoyakim mụrụ Jekonaya,+ Jekonaya amụọ Zedekaya. 17 Ụmụ Jekonaya, bụ́ onye mkpọrọ, bụ Shieltiel, 18 Malkaịram, Pedaya, Shenaza, Jekamaya, Họshama, na Nedabaya. 19 Ụmụ Pedaya bụ Zerubabel+ na Shimiaị. Ụmụ Zerubabel bụ Meshọlam na Hananaya (Shelomit bụ nwanne ha nwaanyị). 20 Ụmụ Zerubabel ise ọzọ bụ Hashuba, Ohel, Berekaya, Hasadaya, na Jushab-hised. 21 Ụmụ Hananaya bụ Pelataya na Jesheya. Nwa* Jesheya bụ Refeya. Nwa* Refeya bụ Anan. Nwa* Anan bụ Obedaya. Nwa* Obedaya bụ Shekanaya. 22 Shekanaya mụrụ otu nwa, nweekwa ụmụ ụmụ. Ha niile dị mmadụ isii. Aha nwa ya bụ Shemaya. Ụmụ Shemaya bụ Hatọsh, Aịgal, Beraya, Nearaya, na Shefat. 23 Ụmụ Nearaya bụ Elio-inaị na Hizkaya na Azraịkam. Ha dị atọ. 24 Ụmụ Elio-inaị bụ Họdavaya, Elayashib, Peleya, Akọb, Johenan, Deleya, na Anenaị. Ha dị asaa.